Midowga Musharixiinta oo ka hor yimid go’aanka Farmaajo | KEYDMEDIA ONLINE
Midowga Musharixiinta oo ka hor yimid go’aanka Farmaajo
Musharixiinta Midoobay ayaa ka soo horjeestay magacaabidda iyo xilalka cusub ee Farmaajo xalay saqdii dhexe ku soo saaray digreetada.
MUQDISHO, Soomaaliya - Golaha Midowga Murashixiinta Madaxtinimada Soomaaliya, ayaa si weyn kaga hor yimid tallaabada uu xalay qaaday Madaxweynihii hore Farmaajo, kaas oo xilal cusub u magaacaabay eedeysanyaasha kala ah Fahad Yaasiin iyo Yaasiin Farey, kuwaas oo loo heysto af-duubka iyo dilka Ikraan Tahliil.
Mucaaradku, waxa ay go’aanka Farmaajo ku tilmaameen mid baal-marsan shaciga dalka u yaalla, laguna hagar-daameynayo, dadaallada Xukuumadda, waxayna Farmaajo ku eedeeyeen inuu doonayo in la daboolo kiiska Ikraan, isla-markaanala la carqaladeeyo doorashooyinka dalka.
“Waxaan canbaareynayaan falalka uu ku kacay Madaxwenaha mudda xileedkiisu dhamaaday, ee uu ku soo saaray go'aannada baal maarsan dastuurka iyo sharciga dalka u degsan. Goluhu waxuu arkaa go'aannadaas in ay yihiin kuwa lagu carqaladeynaayo dadaallada RW Rooble, ee ku aaddan in baaritaan daah furan iyo Caddaalad la marsiiyo kiiska Ikraan Tahlil, sidoo kalena lagu xagal daacinayo doorashooyin daahfuran waqtigoodana ku dhaca.” Ayaa lagu yiri, warka ka soo baxay GMM.
Bulshada Soomaaliyeed, ayay ugu baaqeen in ay ku baraarugaan, go’aannada uu Farmaajo ku khalkhal galinayo xasilloonida iyo ammaanka aan caga badan ku taagneyn ee dalka, waxayna saraakiisha ciidanka ku booriyeen in aysan u hoggaansamin go'aannada Madaxweynihii hore.